Home > Soomaali > Waxbaridda Dhallaanka Aminka Hure > 5 waxyaalood oo kaa caawinaya sidii aad u dooran lahayd Cid caruurta kuu haysa
Xulashada cid caruurta kuu haysaa waa muhiim. Sida Ilmahaaga loo hayo ayaa xukunta koritaanka iyo waxbarashada ilmahaaga iyo sida nabadgelyadiisu tahayba. Ma baahantahay cid caruurta kuu haysa? Raac Shantan waxyaalood oo kuu dhibyaraynaya sidii aad u heli lahayd.
BOOQO. Booqo qaar ka mid ah meelada ciyaalka lagu hayo adoo fiirinaya. Ma yaalaan toy iyo buugaagi? Dadka ciyaalka hayaa ma jecel yihiin inay ciyaalka la hadlaan lana cayaaraan? Ciyaalku ma iska soc socon karaan khatar la’aan? Waqti ma la siiyaa cayaalka lala hadlo, loo akhriyo, loona qoro, halkii ay TV-ga ka daawan lahaayeen? Waxyaabahaasi waxay ilmahaaga ka caawinayaan sidii uu u kori lahaa waxna u baran lahaa.
SU’AALO WAYDII. Isku day inaad ogaato cida cayaalka haysa waayo aragnimada ay u leeyihiin iyo waxa ay aaminsan yihiin. Mudo intee leeg ayay ciyaal hayeen? Tababar sida cayaalka loo hayo ah ma qaateen? Ma ku raacsan tahay nidaam kooda u dejisan adaabta? Sidee ayay cayaalku maalinta ku dhamaystaan? Cida cayaalka haysaa ma haystaa liisan ama shahaadad? Sidee ayay uga qayb qaataan isku xirka guriga iyo meesha cyaalka lagu hayo? Ilmahaaga baahidiisa gaar ahaaneed siday wax uga qabanayaan? Waalid baad tahay, adiga ayaa og waxa ilmahaaga u fiican.
SI FIICAN U DHEGAYSO. Cayaalka hadalkooda farxadi ma ka muuqataa? Dadka cayaalka hayaa si farxadi ku jirto cayaalka ma uula hadlaan? Cayaalku iyaga dhexdooda iyo kuwa hayaba si fiican ma ula cayaaraan? Qaylo badan waa maamul la’aan;Hadal la’aana waxay noqon kartaa dhaqdhaqaaq la’aan.
TIRI DADKA. Tiri tirada cayaalka iyo dadka haya. Inta badan, ha ku xirnaato cayaalka da’doodee, 6-10-kii cayaal ahba waa inuu jiro qof wayn oo haya. Ciyaaalka aad u yar yar ilaa kuwa socod baradka ah, 3-4 tiiba waa inuu jiro qof wayn oo u xil saaran. Cayaalku si fiican ayay wax u bartaan marka qati la siiyo.
CID KA WARAYSO. Warayso waalidka caruurtooda gayn jiray meesha. Maxay ku jeclaayeen ama ku necbaayeen cida ciyaalka haysa? Malooga warami jiray ilmahooda xarakaadkiisa? Mudo intee leeg ayay ilmahooda gaynayeen? Maxay jeclaan lahaayeen inay ka bedelaan meesha hadii ay tooda tahay? Kuwa tababarka u haysta cayaal haynta way og yihiin da’kasta oo cayaalka ah waxa ku haboon
Hadii aad u maahan tahay in lagaa caawiyo sidii aad u heli lahayd una awoodi lahayd kharashka lasoo xiriir Call the Greater Minneapolis Day Care Association’s Referral Service at 612-341-2066.